गण्डकी विश्वविद्यालयको १० वर्षे कार्ययोजना तयार | eAdarsha.com
पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयले सन् २०३० सम्मको लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको छ । विश्वविद्यालयको १० वर्षे कार्ययोजना डा. सूर्यबहादुर जिसीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको हो । जिसीको संयोजकत्वमा डा उमेशसिंह यादव, डा डमरुप्रसाद पनेरु, इ. निर्मल बराल, डा विकास केसी र रेशमलाल पौडेल सदस्य थिए ।
सो कार्ययोजना डा. जिसीले पोखरामा मंगलबार आयोजित समारोहमा विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । कार्ययोजनामा १० वटा रणनीतिक आवश्यकता औंल्याइएको डा. जिसीले बताए । प्राज्ञिक उत्कृष्टता, शिक्षामा परिवर्तनता, नवप्रवद्र्धन तथा आवश्यकता आधारमा प्राज्ञिक कार्यक्रम, उद्यमशीलता र अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्ने संस्कृति, दिगो वित्तीय उपलब्धि, सामाजिक मूल्यका लागि समुदायको संलग्नता, विश्वविद्यालयको छुट्टै पहिचानको विकास, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र संगठनको दिगोपनाको विकास लगायत आवश्यकता रणनीतिक कार्ययोजनामा जोड दिइएको छ ।
कार्ययोजनामा प्राज्ञिक उत्कृष्टता, शिक्षामा परिवर्तनता, नवप्रवद्र्धन तथा आवश्यकता आधारमा प्राज्ञिक कार्यक्रम लगायतमा जोड दिइएको छ
डा. जिसीले यस विश्वविद्यालयमा पढेका विद्यार्थी जिम्मेवार, सिर्जनशील र उद्यमशील नागरिक भएर निस्कनुपर्ने र उच्च शिक्षाका लागि विदेशकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालय भइसकेपछि अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने र अनुसन्धान समाज र राष्ट्रको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सही योजनाका साथ अघि बढ्यौं भने स्रोतको अभाव हुँदैन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट जुटाउन सकिन्छ । नयाँनयाँ अनुसन्धान गरेर पाटेन्टराइटको रोयल्टीबाट पनि स्रोत जुटाउन सकिन्छ, अन्ततिर त्यस्तो अभ्यास छ ।’ स्रोत जुटाउन सकिने आधार समेत रणनीतिक कार्ययोजनामा समेटिएको जानकारी उनले दिए । समाज र राष्ट्रको आवश्यकतासँग जोडिने गरी योजना बनाएको उनको भनाइ थियो । कार्ययोजना कार्यान्वनको पहिलो समीक्षा ४ वर्ष र त्यसपछि ३÷३ वर्ष गर्नुपर्ने उक्त समितिको सुझाव छ । त्यसपछि २०३० बाट अर्काे रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन पनि सुझाइएको छ ।
गण्डकी सरकारले स्थापना गरेको यो विश्वविद्यालयको कुलपति अरु विश्वविद्यालयमा जस्तो सरकार प्रमुख रहने व्यवस्था छैन । न्यासिक परिषदले नै कुलपति, उपकुलपति लगायत पदाधिकारी छनोट गर्छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री संरक्षक मात्रै हुन्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन हुने भएको हुँदा पनि यो विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त र साँच्चिकै स्वायत्त रहेको जिसीले बताए ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नवराज देवकोटाले समितिले दिएको कार्ययोजनालाई प्राथमिक दस्तावेज मानेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले त्यसमाथि आन्तरिक छलफल गरी अझै उत्कृष्ट बनाउने पनि सुनाए । विश्वविद्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डोलराज सुवेदीले विश्वविद्यालयले छिट्टै स्पोर्टस् मेनेजमेन्ट र सूचना प्रविधिमा स्नातक तहको पढाइ सुरु गर्न लागेको बताए । पोखरा ३२, लेखनाथको ज्ञानकुञ्ज विश्वविद्यालयको प्रशासनिक लगायत भवन निर्माण अघिल्लो सरकारले सुरु गरिसकेको छ ।